मण्डन देउपुरमा स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन नबन्दै ठेकेदारमाथि आशंका « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
२ करोड, ८२ लाख ६५ हजार, १२१ रुपैयाँ माथि आशंका
काठमाडौँ २२ असोज : काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १० मा बन्ने चण्डनेनीमण्डल स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवनको शिलान्याससँगै ठेकेदारमाथि आशंका गरिएको छ । मंगलबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बडो तामझामका साथ शिलान्यास गरे पनि गुणस्तरीय रुपमा समयमै सम्पन्न हुनेमा भने शंका गरिएको छ । स्वास्थ्य चौकी भवन भारत सरकारको आर्थिक अनुदानमा २ करोड, ८२ लाख ६५ हजार, १२१ रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको हो । भवन निर्माण बढीमा १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरिएको छ । तर, शिलान्यास समारोहकै अतिथिहरुले भने भवन समयमा गुणस्तरीय बन्नेमा भने आशंका गरेका छन् ।
कार्यक्रममा निर्माण कम्पनीका प्रमुख राजेश गौतमले २०७९ असारसम्म भवन निर्माण गरी बुझाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले अहिलेसम्म आफ्नो कम्पनीले म्याद थप गरेर काम नगरेको धृष्टान्त दिँदै समय अघि नै काम सकाउने बताए । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) काभ्रेका प्रमुख सन्तोष निरौलाले पनि समयमा काम सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । तर कार्यक्रममा सहभागी अन्य अतिथिहरुले भने निर्माण कम्पनीमाथि नै प्रश्न उठाए । मण्डनदेउपुरका प्रशासकीय अधिकृत प्रणराज न्यौपानेले गुणस्तरीय काम हुन नसक्ने भन्दै बेला बेलामा अनुगमन गर्न स्थानीयवासीलाई सचेत गराए ।
काभ्रे कांग्रेसका उपसभापति अच्युत पौडेलले त काममा ढिला सुस्ती र अनियमितता नहोस् भन्दै खबरदारी गर्न आग्रह गरे । पूर्वगृहसचिव एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका प्रशासनिक सल्लाहकार जनार्दन नेपालले पनि भवनको गुणस्तरीयताका लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले ठेकेदार कम्पनीले भवन कसरी बनाउँदै छ, सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको छ कि छैन चनाख हुन स्थानीयलाई आग्रह मात्र गरेनन् अनुगमन नगर्ने हो भने गुणस्तरीय काम नहुने ठोकुवा नै गरे ।
शिलान्यास कार्यक्रममा ठेकेदारकै अगाडि अतिथिहरुले गुणस्तरीय भवन बन्नेमा आशंका गरेपछि स्थानीयसमेत चकित परेका छन् । कमसल सामग्री प्रयोग गरी मिलेमतोमा बजेट पचाउने अहिलेका निर्माण व्यवसायीको धन्दाले यहाँ पनि निरन्तरता नपाउनुला भन्न सकिन्ने अवस्था नै छैन । त्यही भएर पनि होला शिलान्यास कार्यक्रमका अतिथिहरुले नै आफूलाई अब्बल भन्ने ठेकेदारको कामलाई निरन्तर अनुगमन गर्न स्थानीयलाई आग्रह गरेका छन् ।
तपाईको कोरोना खोप लगाएको कार्ड हरायो ? यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं ५ माघ : सरकारले यही माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिकस्थलमा प्रवेश गर्नका लागि कोरोना भाइरस
कोइला बाली झ्याल ढोका थुनेर बस्दा एकै घरका चार जनाको मृत्यु
सुर्खेत २ माघ : वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१० सुर्खेतस्थित बुद्बुदी गाउँमा निस्सासिएर एकै घरका चार जनाको ज्यान